လည်ထောက်ဂီယာ ဖြင့် ခရီးလည်ခြင်း ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်မှ ပြန်ဆုတ်ခွါ သွားသောအခါ သူတို့နှစ်တရာကျော် အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလ သုံးစွဲသော ဘတ်စ်ကားများတော်တော်အိုမင်း ဂျုန်းဂျုန်းကျ နေပြီဖြစ်ရကားပြန်သယ်မသွားတော့ပဲ ထားခဲ့သော အခါ မြန်မာများကမြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဖြင့် လက်ပူတိုက် သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ကြလေသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးလို့စစ်ရှုံးသွားသောဂျပန်ပြန်လည်ထူထောင်နေချိန်-စစ်နိုင်မြန်မာများအတွက်မူ ပြန်လည်ထူထောင်စရာမလိုအပ်သေးချိန်လားမသိ။အချင်းချင်းပြန်ချရေးဘက်အားသန်နေကြပြီး- စစ်ရှုံး ဂျပန် ဆီမှ လည်း ကားအဟောင်းရေယာဉ်အဟောင်းများအလကား ရလိုက်သောကြောင့် ဟန်ဟန်ပန်ပန် ကာလလေးတခုဖြစ်နေဖူးပါသည် ။သို့သော် ၁၉၆၀စောစောပိုင်း တ၀ိုက်ဆီအထိတော့ ဂျပန်ကစစ်လျော်ကြေးအဖြစ်ပေးသည့် သူသုံးပြီးသား ဟီးနိုးကားအကျများ မြန်မာပြည်သို့ ရောက်မလာကြသေးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာစစ်လက်ကျန်-အင်္ဂလိပ်ထားခဲ့သောဘတ်စ်ကားများနှင့်သာ မြို့တကာနယ်အနှံ့ ဆက်လက်သုံးစွဲရသောကာလ-ဟုဆိုကမမှားပေ။
ထိုခေတ်-မန္တလေးကျောက်ဆည်လမ်းမှာခုခေတ်လိုအမြန်လမ်းကျယ် မဟုတ်သေးပါ -ကား၂စီးလွတ်ရုံဂရုစိုက်မောင်းရဆဲ။ရွှေမြန်မာများအဖို့ ကနေဒါမှာလုပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်တင်သွင်းခဲ့သောChevy ဘတ်စ်အင်ဂျင်များကိုပြန်လည်သစ်လွင်အောင်မတတ်နိုင်ကြသော်လည်းဖာကာထေးကာသုံးတတ်ကြပါ သည်။တကျွီကျွီသံဘော်ဒီကားအခွံများကိုသဘောင်္ဆေးမကြာမကြာသုတ်ကြပါ၏။ လိုအပ်လျှင် သစ်သားခွံလည်း ပြောင်းတတ်ကြပါ၏။ ဘတ်စ်ကားခေါင်းများကိုရှေ့ကကြည့်လျှင် ဘုရားတရားသံဃာ ဟူသောစာတမ်းများနဲ့ကားနံမည်ကမ္ဗည်းများမြင်နိုင်ပြီးကားဘေးကိုယ်ထည်များမှာတော့ ပန်းချီဆရာက သူ့စိတ်ကြိုက်ရောက်တတ်ရာရာများခြယ်သထားလေ့ရှိကာကားတိုင်းလိုလို၏-နောက်မြီးမှာ-အရဟံ-စာလုံးကိုစက်ဝိုင်းလေးထဲမှာဝင်အောင်ရေးထားသော အလေ့များခေတ်စားခဲ့ဖူးသည်။ ကပ်မလိုက်ရသတိပေးစာတမ်းနှင့် မနမ်းရဆိုသောပြောင်ချော်ချော် စာတမ်းများ လည်း ထွန်းကားသောခေတ်။
စာဖတ်တတ်စ မူလတန်းကျောင်းသားလေး ကျွန်တော်မူ-တွေ့ကရာစာကို ဖတ်ကြည့်ရင်း ကျောက်ဆည်-ဆန်းသစ်လွင် ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့က ရွှေဆည်မန်း ကားဂိတ်ကိုမှတ်မိ။ စီးနေကျ သစ်ဆန်း မည်သောဘတ်စ်ကားကြီးကိုလည်းမှတ်မိ။ထိုခေတ်ကဘတ်စ်ကားဆရာတော်တော်များများ စတီယာတိုင် နောက်မှာတည့်တည့်မထိုင်ကြပဲ ဘေးခတ်လွှဲလွှဲက ထိုင်ပြီး စတီယာတိုင်ကို- ကိုင်ကြတာ စတိုင်တခုလိုမှတ်မိနေပါသည်။ထိုသို့ကားမောင်းသည်ကို ကလေးတယောက် ကျွန်တော့်အမြင် ကြည့်ရတာ သိတ်ပုံမကျလှ။ ဘာလို့ စတီယာတိုင်နောက်က ထိုင်ခုံမှာ တည့်တည့်မထိုင်ရတာလဲ ကလေးပီပီစပ်စုကြည့်သောအခါ
ကျွန်တော့်ကိုဖြေကြပါသည်။ ငယ်သေး တော့ ဒီလူကြီးတွေ ဟုတ်ပေသားပဲ။ ကားဆရာလည်းကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသားပဲဟု မှတ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုခေတ်အဝေးပြေးကားများမှာအမြန်ကားများမဟုတ်ပါ။ တချိန်လုံး သွားလိုက်ရပ်လိုက် ရွာစဉ်တလျောက် လူအတင်မချ ကုန်အတင်အချလုပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ခုခေတ် ယာဉ်တွေလိုခရီးမတွင်ပါ။ လူတွေက တဖက်တချက်ဘေးတန်းခုံရှည်မှာထိုင်ကြပြီးကားဝမ်းခေါင်းအလည်မှာလည်း ကုန်နှင့်လူရောနှော နေ တတ် ပါသည်။ ကုန်ချိန်အရများသောအခေါက်တွင်ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာ လူနဲ့ကုန်ရော၍လိုက်ကြသည်။ ၀မ်းခေါင်းထဲကကြက်သွန်အိတ်အာလူးအိတ်များပေါ်ထိုင်လိုက်သည့် ခရီးသည်များလည်းရှိပါသည်။ ဘယ်သူမှ မညည်းညူကြပါ။ငြုတ်အိတ်များပါလာလျှင် နဲနဲမွှန်လိမ့်မည်။ သို့သော်မြန်မာများက သည်းခံတတ်ကြပါသည်။
ကျွန်တော်ဘတ်စ်ကားစီးလျှင် ကားခေါင်းခန်း ရှေ့မှန် နဲ့ကပ်လျက်ခုံနေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ကားသွားနေသောရှေ့တည့်တည့်ကိုကော-ကားလမ်းဘေးတွေကိုကော တချိန်လုံးစိတ်ကြိုက် ငေးလို့ရ၍ ကားနောက်ခန်းခုံတန်းရှည်တွေမှာထိုင်ရသလို အတက်အဆင်းခရီးသည်များက ကျွန်တော့်ခြေထောက်ကို မကြာခဏနင်းသွားတာလည်းမခံရပါ။ ကားဆရာနဲ့ကျွန်တော့်ကြားမှာ ဂီယာအုံကိုဖုံးထားသောစက်ဖုံးကြီးတခုသာခြား၍ကားဆရာကားမောင်းနေတာကိုလည်း တချိန်လုံး ထိုင်ကြည့်ခွင့်ရ ပါသည်။ကျွန်တော့်ဘေးမှ ဂီယာအုံစက်ဖုံးကြီးပုံစံက-လေးထောင့်စပ်စပ်မကျတတ်။ ပစ်ရမစ်ကို ထိပ်ပိုင်းကဖြတ်ထားသလိုမျိုး။
ကားခေါင်းခန်းမှာထိုင်ရင်း ကလေးပီပီ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စား-မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်ခဲ့သောအရာ ၃ခုကို ပြောပြရလျှင် ထိုင်ခုံ၌ တည့်တည့်မထိုင်- တခြမ်းလွှဲထိုင်တတ်သော ကားဆရာ၏ ဟန်ပန်။ ကားရှေ့မှန်-အမိုးနဲ့ကပ်ရက်-ဘုရားပုံတော်သေးသေးတချပ်ရှေ့က-မီးပူဇော်ထားသော မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အနီရောင် မီးလုံးလေးနှင့် နောက်ထူးဆန်းစွာပင် ဂီယာတံလည်ပင်း ကိုထောက် ထားသောတထွာခန့်ရှည်၍ လက်နှစ်လုံးခန့်အပြားရှိသည့် သစ်သားပြားလေးတခြပ်ကို အမှတ်ရနေမိ ခြင်းပါ ။
ကားကထွက်စအရှိန်မရသေးခင်မှာအဆင်ပြေပြေရုန်းပါသည်။ထိုသစ်သားပြားလေးအလုပ်မလုပ်ရသေး။ အရှိန်ရ၍ ဂီယာနံပါတ်၃ ကိုပြောင်းသောအခါဂီယာအိုက အလုပ်လုပ်ရန်ုငြင်းဆန်လာပါသည်။ ထိုအခါသစ်သားပြားလေးအလုပ်ရလာပါတော့သည်။ ထိုသစ်သားပြားလေးသာမရှိပါကကားဆရာမှာ ဂီယာတံကိုလက်ကအမြဲကိုင်ထားရလိမ့်မည်ဟုနောင်သဘောပေါက်လာပါသည်။ကားက အိုမင်း နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဂီယာအုံပင်နယံခွေးသွားစိတ်များ တုန်းနေပြီး ကားအရှိန်ပြင်းလျှင် အလိုလို ဂီယာပြုတ်ပြုတ်သွားသောကြောင့် သစ်သားခွလေးတချောင်း နဲ့ ထောက်၍ဖမ်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူကြီးတယောက်ကရှင်းပြပါသည်။သစ်သားပြားလေးအရင်းတဖက်ကကားစက်ဖုန်းမှာ။ သားရေပြားတချပ် နဲ့ အသေသံမှိုစွဲထားပြီး ။ သစ်သားအခြားတဖက်မှာမူ ခွသဏ္ဍန်ပြုလုပ်၍ ထိုခွကြားမှာ ဂီယာတံကို ရုန်းမရအောင်ထောက်ညှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ကားကမရုန်းချင်သော်လည်းဂီယာတံလှုပ်မရအောင် သစ်သားပြားလေးတချောင်းကအတင်းထောက်၍ခိုင်းစေထားလိုက်သောအခါ မတတ်သာပဲ ကားတစင်းလုံးမှာရုန်းနေရတော့သည်။
အံ့သြစရာ ထိုသစ်သားပြားလေး တချောင်း -အရေးပါပေစွ။ ကားတစီးလုံး လိုရာရောက်အောင် ပန့်ပိုးအလုပ်လုပ်ပေးနေပါသည်။သံသေတပြည်ဝ ကိုအင်္ဂလိပ်- ကိုဂျပန်တို့ မလုပ်သည့်အလုပ်ကို မြန်မာတို့လုပ်တတ်သည်-ထိုဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်သစ်သားပြားလေးတထွာတမိုက်က ကျွန်တော်ဘ၀ပေးအသိတွေကိုလည်းတလျောက်လုံးတတိတိ ခလုတ်တိုက် ။ တရိရိဦးနှောက်စား ခဲ့ကြောင်း နောက်ပိုင်းသဘောပေါက်လာပါသည်။
တကြိမ်မှာ-ခေါင်းခန်းကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေသောခရီးသည်တယောက်ကအလျင်စလိုနဲ့ ကားဆရာကို “မန္တလေး ဘယ်တော့ရောက်မလဲကားဆရာ-ခင်ဗျ”-ဟုမေးမိရာ-ကားဆရာက “ ဒီလိုမမေးရဘူးဆိုတာ-ခင်ဗျားမသိဘူးလား” ဟု စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဟောက်ပါသည်။ သူ့ခင်များဆက်မမေးရဲပဲ အကြောင်သားငြိမ်သွားပါသည်။နောင်ကျွန်တော်က ကိုယ့်ထက်တတ်သောလူကြီးသူမများကိုမေးသောအခါ ကားဆရာတို့ကခရီးသွားနေတုန်းရောက်မည့်အချိန်ကြို မေးလျှင်နမိတ်မကောင်း။လမ်းမှာအနှောက်အယှက် ဖြစ်တတ်တယ်။ တခုခုဖြစ်တတ်တယ်။ ကားလည်းပျက်တတ်တယ်။ မမေးကောင်းဟု ချိန်ချိန်ဆဆပြောကြပါသည်။
ထိုစဉ်ကစ၍ ကျွန်တော့်အာရုံတွင် ကားဆရာတယောက်ကို-ခရီးသွားနေစဉ်ဘယ်အချိန်ရောက်မှာလဲ-ဟုမေးရန်မှာမသင့်လျော်သောမေးခွန်းတခုဟုမှတ်သားလိုက်ပါသည်။နမိတ်မကောင်းသောမေးခွန်း။ကားဆရာအတွက်လွန်စွာစိတ်ဆိုးစေသောမေးခွန်းဟုစွဲသွားပါသည်။ထိုအစွဲဖြင့်ကျွန်တော်သည်ခေတ်တခေတ်လုံး ဖြတ်သန်း အသက်ကြီးလာခဲ့ ပါသည်။
ကျွန်တော်ကြုံရသောခေတ်တွင် အညမည ကို အင်ညမင်ညဟုဖတ်ပါဟုစာအုပ်က သေချာပြောထားသော်လည်းစာအုပ်ကြီးကပြောသလိုသေချာလိုက်ဖတ်သည့် လယ်သမားများများစားစား မတွေ့ဖူးလိုက်ပါ။အ အက္ခရာကို အ။ ညအက္ခရာ ကို ည …ပီပီသသ အသံထွက်ဖတ်သူတွေသာပိုများပြီးဘယ်သူကမှအင်ညမင်ညဟုဖတ်သည်ကိုမတွေ့။ စာအုပ်အဖုံးနံမည်ကိုသာဖတ်သူများပြီးအတွင်းပိုင်းလှန်လှောသေချာဖတ်သူကိုမတွေ့။ ကျွန်ပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသောအထွေထွေလူမှုဒုက္ခများကိုဖွင့်ဆိုရာ၌....အူမ-မတောင့်သဖြင့်-သီလမစောင့်နိုင်သောဒုက္ခအကြောင်းကိုဖေါ်ပြပြီး….ကိုယ့်အူမတောင့်သော်လည်း-ကိုယ့်တဆွေလုံးတမျိုးလုံး အူမ-မတောင့်သဖြင့်သီလမစောင့်နိုင်သောအခြားလူမှုဒုက္ခတမျိုး လည်းရှိနိုင်သေးသည် ဆိုသည့်အပိုဒ် ကျန်သွားသလားဟု ထမေးတတ်သောလယ်သမားမျိုးလည်း တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါ။
“ မောင်-အလုပ်သမားဆိုရင်…. ပျို…ကပင်..စတင် ..စတင် ချစ်… ချစ်ပြရစေရှင် အနားမှာကျောခင်းကပ်ကာ…ပြောချင်ပါသည်”ဆိုသောသီချင်းမှာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကလွန်စွာခေတ်စားလှပါသည်။လူထူထူစုမိလျှင်ကြားရတတ်သည်။
“အမှတ်တစ်ကတော့…. ဆိုရှယ်လစ်လူ့ဘောင်သစ်.. တည်ဆောက်ရေး.. လုပ်အားပေးရမည်။ အမှတ် နှစ် ကတော့ …ကျမနဲ့ ရာသက်လုံးပြုံးကာပြုံးကာချစ်ကြပါစို့အတည် ”ဆိုသော ထိုသီချင်း ကို အင်းလေးခေါင်တိုင်စံပြလုပ်သားအပမ်းဖြေစခန်းမှာအငြိမ့်သမလေးတယောက်က ကပြဖျော်ဖြေလိုက်သည်။ ယင်းကို ပျော်စရာလိုလိုအိပ်မက်လိုလိုနားထောင်ပြီးပြန်လာသော မြစ်ငယ်မီးရထားစက်ရုံကစံပြလုပ်သားကြီး တယောက် သူ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များထ၍ လူ့ဘောင်မသစ်နိုင်ခင်-စားစရာမရှိတော့လို့-လစာတိုးရေးသပိတ်မှောက်လိုက်သောအခါ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိရှာတော့ပေ။
ထိုအခါကျွန်တော်လည်းထိုလုပ်သားကြီးလို-လည်ချောင်းများတစ်ဆို့နေပြီးသစ်သားချောင်း တချောင်းထောက်ထားသလိုခံစားလာရပါသည်။ကျွန်တော်စီးသောဘတ်စ်ကားမှာ ပါလာသော ခရီးသည်များလည်း အသံတွေ တိတ်ဆိတ် လွန်းလှပြီး သူတို့လည်ချောင်းမှာ တခုခုများတစ်ဆို့နေသလားဟု ထင်လာမိပါသည်။
သူများတကာအပေါ်မယုံသင်္ကာဖြစ်၊သံသယကြီးဖြစ်တတ်သည့်ထိုအထင်သည် ကျွန်တော့်တွင်စိတ္တဇဝေဒနာတခုလို စွဲကပ်လာပါသည်။အသက်ကြီးလာသည်အထိ မပျောက်ပဲသစ်သားပြားတချောင်းထောက်ထားသလိုမျိုး တစ်ဆို့ဆို့ဖြစ်နေကာ ဘယ်သူ့ကိုတိုင်ပင်ရမှန်းလည်းမသိပါ။
သက်သာလိုသက်သာငြားခေတ်တီဗွီသတင်းများကိုကြည့်မိသောအခါ ဘောလုံးကွင်းကြီး တခုထဲ၌အလုပ်သမားများစွာစုရုန်း၍လက်သီးများဆုတ်ကာမြှောက်ကာတစုံတရာကြွေးကြော် နေကြသည် ကိုတွေ့သော်လည်းကျွန်တော်ဘာသံမှမကြားရပဲဖြစ်နေသည်။အသံအားလုံးလည်ပင်းမှာပျောက်သွားသလိုလို။ သူတို့အားလုံးလည်ပင်းမှာတခုခု တစ်ခံနေ သလားဟုထင်ယောင်မြင်ယောင်ဖြစ်လာပါသည်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ခေတ်သတင်းစာများ ကောက်ကိုင်ကြည့်သောအခါ၌လည်းလှည်းတန်းကြီးများတမျှော်တခေါ်ရိုက်ပြထားသည့်သတင်းဓါတ်ပုံများ။ လှည်းတွေပေါ်မှာလယ်သမားကြီးများစွာ ။ တာဝန်ကြေစပါးအပြီးစေတနာစပါးလာရောင်းကြခြင်း ဆိုသောတခန်းတနားသတင်းဓါတ်ပုံ ဝေေ၀ဆာဆာ များကို ကြည့်ကာ သံသယစိတ်များကြီးထွားနေပြီး ကျွန်တော့်အာရုံမှာထိုဦးကြီးများစွာ၏ရင်ဘတ်တွေပေါ်၌ သစ်ဆန်း ဘတ်စ်ကားပေါ်ကသစ်သားပြားတွေ တွဲလောင်းကျနေတာ။ သူတို့မျက်နှာတွေအေးစက်နေလိုက်တာ စသဖြင့်-ကယောင်ချောက်ခြားအတွေးတွေလွှမ်း နေပါသည်။
နောက်ပိုင်း-ဒါစိတ်ရောဂါလား-စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်ကိုယ့်အခြေအနေကိုစိတ်ရောဂါဆရာဝန်တယောက်နဲ့ ပြောပြမှဖြစ်မယ် ဟုတွေးမိပြီးဆေးခန်းသွားသေးသော်လည်း ဆရာဝန်ကိုမြင်လိုက်သောခဏ ထိုဆရာဝန်လည်ပင်းမှာလည်းသစ်သားချောင်းတချောင်းဆွဲထားတာဖြတ်ခနဲမြင်မိသဖြင့် လှည့်ပြန်လာခဲ့ပါ သည်။
ခေါင်းမြီးခြုံအိပ်သောအကျင့်ရလာပြီးခေတ်တခေတ်ကူးပြောင်းသွားပြီကြားရ၍ တီဗွီ ဖွင့်ကြည့် လိုက်သောအခါ ပညာရေးကော်မီတီဥက္ကဌရှေ့မှာ တက္ကသိုလ်ဆရာမများလက်အုပ်ချီနေသည် ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ထိုအခါခေါင်းမြီးခြုံစိတ်ကသစ်ဆန်းဘတ်စ်ကားပေါ်ပြန်ခုန်တက်သွားပြန်သည်။ ဆက်လက်ကြည့်နေစဉ်-ဗွတ်ကြီးရေလှောင်တမံဖွင့်ပွဲဂုဏ်ပြုသီချင်းနောက်ခံဖြင့်တလှုပ်လှုပ် သရုပ်ဆောင် နေသောမင်းသမီးကိုသက်တောင့်သက်သာမဟုတ်ပဲမြင်ပြန်သည်။နင် ဘာလို့ သီချင်းတခြားလူတခြား ဖြစ်နေတာလဲမေးသောအခါကျမကိုတနေရာမှာရိုက်ကြတာ။ သီချင်းနောက်ခံတွေကတနေရာမှာ ရိုက်ကြတာ။ဘာသီချင်းသရုပ်ဆောင်နေရလဲ ကျမမသိဘူး။ မမေးရဲဘူးဟုသူ့လည်ချောင်းကိုသူ လက်ညှိုးထိုးပြပါသည်။ သီချင်းရေးသူနဲ့အိပ်မက်ထဲမှာဆုံကြသောအခါမှာလည်းဗွတ်ကြီးတမံကို အသံသာအောင် မရေးနိုင်ကောင်းလားအပြစ်တင်မလို ကျွန်တော်ကလုပ်သည်။ သူက ခေါင်းတခါခါ၊လက်တကာကာပြန်လုပ်၍ လည်ပင်းကိုပင်ထောက်ပြပါသည်။
အမှတ်မထင် တချိန်မှာ သတင်းဓါတ်ပုံတခုဆီ ကျွန်တော်အာရုံရောက်သွားသည်။ ထိုဓါတ်ပုံတွင် အရာရှိအကြီးကြီးတွေတစုတစည်းထဲလေဆိပ်မှာ-တစုံတယောက်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နေစဉ်ရိုက်ထား သည့်ပုံဖြစ်ပြီးအားလုံးမှာတူညီဝတ်စုံ။ညာလက်တွေမြှောက်ထားပုံကလည်းအားလုံးတူညီ တချိန်ထဲ လက်မြှောက်နှုတ်ဆက်နေကြပုံမှာအချွတ်အချော်မရှိကွက်တိ။ အရာရှိကြီးကတော်တွေအားလုံးလည်း ချိတ်ထမီကိုယ်စီ ပုဝါကိုယ်စီခြုံတာတူညီ၊ ညာလက်တွေအားလုံးမြှောက်ထားတာလည်းကွက်တိ။ထိုအခါ ကျွန်တော်တို့သည်တချိန်မှာ ကားဆရာဖြစ်နိုင်သလို တချိန်မှာ ကားဆရာလက်ထဲက သစ်သားပြားလေးတချောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အသိတရားတခုထပ်တိုးလာပါသည်။
ကျွန်တော့်သက်တမ်းမှာ- ဒီခရီး-ဘယ်တော့ရောက်မှာလဲမေးလျှင်စိတ်ဆိုးသော ကားဆရာ။ ဂီယာကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ထောက်ထားသောသစ်သားချပ်။ တအီအီသွားတတ်သော ဘတ်စ်ကား အိုကြီးနှင့် ကားအိုပေါ်ကအသံတိတ်တိတ်မျက်နှာသေသေခရီးသည်များ။ စသည်များကိုသာ တွေ့ကြုံလွှမ်းမိုးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် …ထိုင်ခုံမှာတဲ့တဲ့ထိုင်ကာယုံယုံကြည်ကြည်မောင်းရဲသောကားဆရာ-ဒီခရီးကိုဘယ်တော့ရောက်မှာလဲဟုမေးမိလျှင်စိတ်မဆိုးသောကားဆရာ- ဘယ်တော့ရောက်မယ် လို့မှန်းတယ်ဗျာဟုယုံယုံကြည်ကြည်ပြန်ဖြေတတ်သောကားဆရာ- မကောင်းသော နမိတ် ကိုမကောက်တတ်သော ကားဆရာမျိုး ကို မျှော်လင့်နေမိဆဲပင်။
ခွန်ဆိုင်း ( ၂၇.၁၁.၂၀၁၄ )